Fiarabe mpitondra fasika iray indray no tapaka hisatra tamin’ny fidinana manelanelana an’Isaha sy Anjoma omaly, ka tsy tana. Olona 8 no naratra vokatr’izany, ary 3 maty tsy tra-drano ka 2 vehivavy ary 1 kosa lehilahy, araka ny fampitam-baovao. Vao ny 4 oktobra lasa teo anefa no nisy ilay “sémi-remorque” feno entana mavesatra tapaka hisatra ihany koa, ka nandona fiara am-polony sy nanitsaka olona 3 izay maty tsy tra-drano, ankoatra ireo naratra. Andro vitsy taorian’izay, mbola nisy lozam-pifamoivoizana namoizana ain’olona iray tao an-toerana. Toa resaka fahatapahana hisatra avokoa tamin’ny ankapobeny no anton’ireo loza sesilany tao Fianarantsoa. Mila handraisana fepetra satria matetika loatra. Ny fanaharaha-maso ny fiara ve no tsy ampy sa ny loza mihitsy no efa ho avy ? Ilaina hatrany ny mailo sy ny mitandrina na ho an’ny mpampiasa fiara na ho an’ny mpandeha an-tongotra satria ny loza tsy mampiomana. Sady loza mitatao amin’ny tena no mety hampiditr’andro ho an’ny hafa rahateo ny tsy fitandremana.